किन जान्छन महिला डेटिङ ? अध्ययनले खोल्यो यस्तो रहस्य – BRTNepal
किन जान्छन महिला डेटिङ ? अध्ययनले खोल्यो यस्तो रहस्य
बिआरटीनेपाल २०७६ कार्तिक २ गते ८:२० मा प्रकाशित
पछिल्लो पटक गरिएको एक अध्ययनले महिलाहरु पुरुषसँग डेटिङ जाने बिषयमा नयाँ रहष्य खुलेको छ । आम रुपमा महिलाहरु पुरुषसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छन् । कुनै पनि पुरुषसँग नजिक हुँदै गरेकी महिलाको चाहना रोमान्ससहित लामो सम्बन्ध स्थापित गर्ने नै हुन्छ । तर, पछिल्लो अध्ययनले सबै महिला रोमान्स वा जीवन साथीको रुपमा मात्रै पुरुषलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने नरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।